Umvelisi wevili lase China umatshini kunye noMthengisi | URuiyi
Iivili zePU lukhetho oludumileyo kwizicelo zeshishini ngenxa yokuzola kwazo xa zisebenza xa kuthelekiswa namavili anzima afana nentsimbi okanye intsimbi. Iivili ze-PU njengesixhobo sokumothusa kwaye zinceda ukuqhuba ukukhwela. Ikwafunxa amaqhuma avela kumhlaba ongalinganiyo. Sebenzisa ivili le-PU endaweni yentsimbi kunokunciphisa kakhulu amanqanaba engxolo ukunceda ukukhusela ukuva kwabasebenzi bakho.
Iivili zePU umgaqo kwizicelo apho ukukhusela umgangatho kubalulekile. Iivili ze-PU ziya kuphambuka kwaye zenze umzila omkhulu ngakumbi kunakwizinto ezinamavili anzima, ezinjengeyiloni. Lo mmandla umkhulu kunceda ukunciphisa uxinzelelo kuxinzelelo emgangathweni kunye nokuzigcina zikwimeko engcono ixesha elide. Kwizityalo ezinemigangatho ibiza kakhulu kwaye ibalulekile ekusebenzeni kwakho, ivili le-PU linokukhetha.
Enye inzuzo ku Iivili zePUUkusetyenziswa kwemizi-mveliso kukulingana kokungqubana kwemathiriyeli. Eli xabiso lichaza umlinganiso wamandla okuxubana phakathi kwemizimba emibini kunye namandla ayicinezela kunye. Imiphezulu yeerougher ihlala inamaxabiso aphezulu asebenzayo ngelixa umphezulu ogudileyo unezantsi ngenxa yomlo oveliswayo xa ucinezelwe kunye.
Iivili zePU ithambekele ekubeni yinto ekruthayo, ke umlinganiso wayo ophakamileyo wokungqubana unokunceda ukugcina iinqwelo ezirhuqwayo zingaphephi. Ukuqwalaselwa okubalulekileyo njengokutyibilika kunokuba yingxaki kwizinto ezinamavili ezinzima.
Iivili zePU ikwabonelela ngokutsala okugqwesileyo ukuqhuba amavili kwaye inceda ukunciphisa inani lomthwalo kwivili ukufezekisa amandla okuqhuba afunwayo.
Ubungakanani Ngama-82 * 56 * 6CM
Amavili kwezinye iimoto
Ukubamba kakuhle, akukho lula ukutyibilika, ukusebenza ngakumbi ukunxiba, ukusebenza okunethezekayo
Egqithileyo Kucingo olubiyele izilwanyana zasekhaya
Okulandelayo: Ivili lerabha
I-China i-PU Foam Isondo, Eziphathekayo Umxhubi Iinkuphelostencils, Ivili likaCaster, Umxube weKhonkrithi yase China, DB Ivili, Isondo le-China PU,